Archive du 20181213
Mponin’i Vohidiala-Alaotra “Tsy naka ny taninay izany i Dada”
Gaga sy talanjona ny mponina eto Vohidiala amin’ny resaka aparitaka fa nalain’i Dada Ravalomanana ny taninay, hoy ny raiamandreny iray 70 taona ary efa nipetraka 40 taona tao an-toerana.
Mpivoy ny fanorenana ifotony Miantso ny tia tanindrazana hivory eny Ivato
Efa niteny foana izahay, hoy ny mpanao politika, Joseph Yollande, fa tokony handeha mialoha ny fifidianana ny fanorenana ifotony.
Krizy aorian`ny fifidianana Volena ao anaty sain`ny Malagasy ?
Lasa resabe ary volena ao anaty sain’ny Malagasy mihitsy fa hisy olana aorian’ny fifidianana.
Mpanao politikan-tseza Ho sahirana atsy ho atsy
6 andro sisa dia ho tonga ny datin’ny 19 desambra. Fotoana farany hanapahan’ny vahoaka Malagasy ny tena tiany hitondra azy.
Hanasoavana ny Malagasy ny MAP 2 Asa mivaingana ao anatin’ny 100 andro
Tany amin’iny ilany Atsimo Atsinanan’ny Nosy sy Vatovavy Fitovinany sy Menabe toa an’i Vohipeno, Farafangana, Manakara, Morondava no nanatanterahan’i Marc Ravalomanana fampielezan-kevitra omaly.
Adin’ny kanosa sy politika maloto Raikitra ny fanosoram-potaka sy fisolokiana
Ankoatra ny fandanian-drora any anaty haino aman-jery, dia naparitaka nanomboka omaly indray ny trakta sy ny afisy natao hampiroaroa saim-bahoaka sy hanakiviana azy hankahala an-dRavalomanana.
Tsy fiandanian’ny governemanta Hendry ny TIM, tsy tan-dalàna ny MAPAR
Raran’ny lalàna tsy afaka manao fampielezan-kevitra ny olom-panjakana ambony voatendry tamin’ny alalan’ny didim-panjakana, tahaka ny minisitra sy tompon’andraiki-panjakana ambony samihafa.
Paositra Malagasy Hiompana amin`ny asa fandraharahana ara-bola
Nandray ny asany ny tale jeneraly vaovaon`ny Paositra Malagasy (PTT), Ranarison Richard, izay eo anivon`ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN).
Nanao jery todika momba ny politika nasionalin’ny fampananana asa sy fampiofanana arakasa tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ireo mpisehatra ao amin’izany ao amin’ny minisitera tamin’ny alatsinainy 10 desambra lasa teo.
ZANDARY MATIN’NY DAHALO
Zandary roa indray no matin'ny dahalo tany Maintirano, fokontany Ambanja. Niaro ireo mpiasan'ny instat nanao iraka tany ireo zandary ireo nandritra ny fanafihana.
Velom-bolo ireo mponina teny Ambohitrakely omaly fa nandalovan’ny kandida ho filoham-pirenena, laharana faha 25, Marc Ravalomanana, ny tanàna.
Fanangonana ny fakon’Antananarivo Mandeha ny asa ary hohafainganina
Fisaorana no nasetrin’ny minisitry ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, Rolland Ravatomanga ny tsikera nisy nahazo azy ny amin’ny fahataran’ny fandraisana andraikitra momba ny fanangonana ny fako eto Antananarivo.
Fiatrehana loza sy tandindon-doza Hiara-kiasa ny sivily sy ny mpitandro ny filaminana
Nifarana omaly alarobia 12 desambra tetsy Antanimora ny atrikasa fampiofanana ireo sivily sy mpitandro ny filaminana entin’izy ireo miara-miatrika ny fanampiana ny mpiara-belona amin’ny fiatrehana ny loza sy tandindon-doza eto Madagasikara.
Fanavaozana ny entana isan-tokantrano Manome fihenam-bidy ny Baolai
Ao anatin' ny vaninandro fety tokoa isika izao, ka magazay maro eto no manavao ny tolotra omeny.
Beach Soccer Laharana faha-5 ny Barea Malagasy
Resin’ny Barea Beach Soccer Madagasikara tamin’ny 5-2 omaly
Toe-javatra iray zary hita ho misy manararaotra ho fitaovana politika amin’izao fotoana izao ny fitantanana ny fako eto Antananarivo.